Amathegi we-Rfid, i-Rfid Card, i-Rfid Wristband - iToptag
Okumanzi / Okomile kwe-RFID Inlay
Amalebula we-RFID Anti-mbumbulu
I-RFID Tag Clothing
I-RFID Ubucwebe Bethegi
I-RFID Tag Special
I-RFID Tag Ceramic
RFID negesi eyisilinda Tag
Ukuphathwa Kwezilwane ze-RFID
Indandatho Yonyawo Lwamajuba
I-RFID Yokuvimbela Ikhadi
Njengomkhiqizi wemikhiqizo we-RFID onolwazi, sinikela ngemikhiqizo ehamba phambili.
INKONZO YOKWENZA NGOKWENZEKA
Ithimba lokuthengisa le-Toptag linganikeza iziphakamiso zobuchwepheshe zesidingo sakho esenziwe ngezifiso. Sinikeza amasampula wamahhala wokuhlolwa kwakho.
I-Toptag ilungisa njalo inqubo yokukhiqiza, inciphise izindleko zokukhiqiza, futhi ithuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza, ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nemikhiqizo eshibhile.
Okuhlangenwe nakho kobuchwepheshe
isipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-20 sokukhiqiza, izintonga ezingama-2000, amaqembu ayi-10 e-R & D nemigqa engama-20 ephezulu yokukhiqiza amakhadi namathegi. I-Toptag inikezela nge-R & D, ikhiqize futhi ithengise imikhiqizo ye-RFID nesisombululo se-RFID.
Sinikeza izinhlobo ezahlukene zamathegi we-rfid wohlelo lokusebenza oluhlukile. Sakha imikhiqizo emisha ye-RFID ngokuya ngezidingo zamakhasimende ...
Abathuthi beToptag basiza ekuqinisekiseni ukulandelela okungenamthungo futhi banciphise ukulahleka, ngenkathi kuthuthukiswa ukuphathwa kwesitoko nejubane lokulungisa. Amathegi we-RFID wokuxhumana ongaxhunywanga athuthukisa isivinini sokuqoqa idatha nokunemba, okwenza ukulandelela kubize kakhulu ngenkathi kukhulisa ukunemba.
Isebenzisa ubuchwepheshe be-RFID ukuphatha kahle amalineni wezohwebo noma azimele, izingubo noma amacansi, nokwenza ngcono ukusungula nokunciphisa iphutha lomuntu ekuhlanzeni nasekukhokhiseni izinqubo. I-Toptag inobudlelwano besikhathi eside noHilton, Marriot.
Ukuphathwa kwe-RFID Laundry
Ubuchwepheshe bemicimbi engenantambo buye baba yinto ejwayelekile emikhosini yomculo ephezulu yezwe, abalandeli begqoke ngokuziqhenya amabhande abo e-RFID unyaka wonke njengamabheji okuhlonipha. I-Toptag ibibambisene nemikhosi eminingi efana nomkhosi waseRio, i-SnowGlobe Music Festival njll.
Amathikithi Omcimbi & Ezokuzijabulisa
AbakwaToptag bahlanganisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokulawula zonke izici zesipiliyoni sokunakekelwa kwezempilo ngaphakathi kwendawo eyingqayizivele yesikhungo sokunakekelwa kwezempilo - ukuphathwa kwezivakashi, ukulandelwa kwempahla nezimo zokuqapha, izinsizakalo zendawo yesikhathi sangempela, ukukhokhisa kanye nokuthula kwengqondo.
Ukunakekelwa Kwezempilo kweRFID
Ngamashumi eminyaka yesipiliyoni ekwakhiweni kwezixazululo zokulawula ukufinyelela okuqinile zokufinyelela ngokomzimba nangokunengqondo, iToptag ithembekile yizinhlangano nohulumeni ukuhlinzeka ngezixazululo ezingenakuqhathaniswa zokuphepha nokuvikela.
Amathegi e-RFID avumela amasistimu ukukhomba izimoto ezizokhonjwa ngombane kusuka kumamitha kude. Izimoto zingahlolwa ngokuzenzakalela, kanye nomthwalo okhonjiwe. Zingahlolwa futhi futhi kalula. Ngosizo lochwepheshe, i-RFID ingahlinzeka ngendlela ethembekile yokukhomba izinhlobonhlobo zezimoto, ukuzibeka endaweni ethile noma endaweni ethile esizeni, nayo esetshenziselwa ukuphathwa kwe-ETC noma Ukupaka.
Ukumaka imfuyo nge-RFID kungaba yithuluzi elibalulekile emkhakheni womlimi wokuhlonza isilwane ngasinye kanye nozalo lwaso nolwazi lwezokwelapha. Abahlengikazi bezilwane manje bafuna ukuthi zonke izilwane zasekhaya zilandelwe kusetshenziswa i-RFID ukuze zakhe uhlelo lokukhomba izilwane ezifuywayo ezilahlekile nezitholakele.
I-RFID-on-metal transponders ingaba ezinhlotsheni eziningi zokulandelwa kwempahla kanye nokusetshenziswa okubanzi kwezimboni. Izicelo eziyinhloko ukulandelwa kwempahla kumaseva nakuma-laptops ezikhungweni zedatha ye-IT, ukulawulwa kwekhwalithi yokukhiqiza kwezimboni nokukhiqiza, ukugcinwa kwamapayipi kawoyela negesi, namasilinda kagesi, ukulandela ngomkhondo ithuluzi, nokulawulwa kwekhwalithi yedivayisi yezokwelapha.
Namuhla, noma ngabe ku-EC nakumakhadi esikweletu, amakhadi omazisi womuntu siqu, amaphasipoti noma amakhadi omshuwalense wezempilo, imininingwane igcinwa kuma-chips amaningi we-RFID, ngosizo lohlelo lokusebenza olufanele, imininingwane yomuntu uqobo ingafundwa ngasese ngama-smart phone. Amakhadi we-Toptag's RFID blocking anikela ngokuvikelwa okuthembekile ekufundweni okungagunyaziwe kwedatha ebangeni lemvamisa le-13.56 MHz.
Inkampani yethu yasungulwa ngo-2008 ngamahhovisi amabili amakhulu atholakala eHong Kong naseShenzhen, eChina. Inkampani yethu isungulwe yiqembu labantu abanothando futhi abanobuciko abanokuhweba okucebile kwe-RFID nokwakha ulwazi. Inkampani yethu ikhethekile kumathegi ahlukahlukene we-RFID namalebula anezimo ezihlukile nezinto zokwakha. Omaki bethu baqala kusuka kumvamisa ophansi kuya kumvamisa we-ultra-high, asetshenziswa kakhulu emkhakheni we-NFC, inkokhelo yeselula, ukulawula ukufinyelela, ukuphathwa kokuthengwa kwempahla, ukuphathwa kwempahla, ukugcinwa nokuphathwa kwempahla, ukuphathwa kwemfuyo nokunye.
Igumbi 1401, iZhuJiang International Center, LongXiang Avenue, LongGang District, Shenzhen, China 518172.
Ukuguqulwa kwamaphakethe okukhaliphile kwemikhiqizo yokuvikela ezempilo nezempilo
I-Recresco isebenzisa i-RFID proximity alarm system efektri ukunciphisa ubungozi bokushayisana phakathi kwabantu nezimoto